Afrikaan.so | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dhibaatooyinka ay geystaan fatahaadaha webiyada iyo roobabka ayaa waxay ka noqdeen gudaha Soomaaliya wax soo noqnoqda, kuwaasoo baabi`yay dad iyo duunyaba. Marka loo barbardhigo dhulalka wabi-mareenka ah dalka intiisa kale waa dhul lugu tiriyo dhulalka qalalan, iyadoo ay taasi jirto ayaa xilli roobaadyada sida xilliga gu’ga markuu si fiican u roob dhigo ayuu wuxuu sababaa in ay dooxyadu biya badan soo rogaan kuwaas oo loo yaqaanno “daadad” waxayna saameeyn iyo waxyeelaba u geeystaan kaabayaasha dhaqaale iyo hab-nololeedka bulshooyinka u badan xoolo dhaqatada ee halkaas degan iyo sidoo kale dadka ku nool magaalooyinka. Iyadoo ay dhibaatooyinkaasi jiraan, madaxda Soomaaliyeed waxaad u …
Majaladda Sebteember/Oktoober 2020
Halkaan kala dag majaladda Afrikaan SEBTEEMBER 2020 MAJALADDA AFRIKAAN.SO PDF waa haddii aadan rabin inaad sii akhriso qoraalkaan: “Ilbaxnimo kastaa waxay ku qotontaa taariikh bulsho oo wax laga bartay. Shuruucda iyo xeerarka dadku samaystaana waxay ka amba qaadaan waayo-aragnimada iyo baahida bulshadaas. Sidaas awgeed, Afrikaan.so waa deggel hormuud u ah wararka madaxa bannaan iyo ajendaha-dejinta wararka, falanqaynta siyaasadeed iyo faallooyinka fikirka-gaarka ah ee sida gaar ah loogu qoray/diyaariyey jiilka cusub ee fikirka madax-bannaan iyo kuwa muxaafadka ah. Sidoo kale, Afrikaan.so waa deggel u taagan in qoraalku noqdo mid qiimo leh, in aragtiyada iyo xal u helida dhibaatada bulshadeena lagu lafa-guro. Sida ka …
Dhacdadaan waa dhacdo dhabta ah oo ay ku dhacday nin dhalinyaro ah oo reer Koongo, oo laga soo qafaashay dalkiisa waxaana la keenay Mareykanka. Waxaa la qabtay bishii Maarso sanadkii 1904-tii, waxaa Koongo ka qabtay ganacsade Mareykanka u dhashay oo la yiraahdo Samuel Verner, Inkasta oo aan xilliggaas la ogeyn da’diisa balse waxaa lagu qiyaasay 12 ama 13 jir. “Mid ka mid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan ee ku saabsan saameynta horumarka ee xiriirka aadanaha waa sheekada Ota Benga, oo ah nin caan ah oo lagu soo bandhigay beerta xayawaanka ah tusaale ahaan isir ahaan liidata. Dhacdadu waxay si cad …
Halkaan waxa aan kusoo gudbinayaa soo koobid ku saabsan dhiganaha “5-TA TIIR EE GUUSHA”. Buugga 5-ta Tiir ee Guusha waa buug qeexaayo tiirar ka kooban shan. Buugga “5-TA TIIR EE GUUSHA” waxa uu ka mid yahay tirada buuggaagta ah oo sannadkan gudihiisa soo galay maktabadda buuggaagta. Waa buug uu qoray Cabdijabaar Sh. Axmed. Horumarka guud ee dal ama dad waxa uu ku xiranyahay isu geynta haynta dhaqaale ee qofafka ummaddaasi ka kooban tahay. Qoraaga waa qoraa da’ yar oo dhawaanahan qoray buuggaag iyo qoraallo kala duwan oo aan dhanka wax tarka kala dhicin. Xikmadaha nolosha waa inaad heshaa buuggaag cajaa’ib …
Waxaad Neelakantha Bhanu Prakash ku tilmaami kartaa Usain Bolt-ha xisaabta. Waxa uu jiraa 20 sanno, wuxuuna ku guleystay billad dahab ah mar uu ka qeyb galay tartanka xisaabaadka maskaxda. Wuxuu sheegayaa in tartankaasi uu yahay ciyaaraha maskaxda kaasi oo meessha ka saarayo xabsida laga qabo xisaabta. Bhanu wuxuu sheegayaa in “Markasta uu ka fakaro tirada” haddana uu yahay qofka ugu dhakhsiyaha badan dunida oo dhan marka ay timaaddo xallinta xisaabta, gaar ahaan xisaabta kor laga sheego adigoon qalin ama meshiinta xisaabta qaadan. Wuxuu isbar-bardhigay dadka leh hibada xisaabta iyo dadka kale ee u tartama cayaraha kala duwan, waxa uu tilmaamay …
Kadib dagaalkii 1967 ee Israa’iil iyo Carab oo dhex maray Masar, Urdun iyo Suuriya oo dhinac iyo Israa’iil oo dhinaca kale, waddamada carabta ayaa kafaala qaaday oo riixay qaraarkii Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay 242. Qaraarkii UNSC ee 242 ayaa sanadihii ugu dambeeyay loo adeegsan jiray aasaaska ee wadahadalada u dhexeeya carabta iyo Israa’iil. Qaybta ugu muhiimsan ee qaraarkaan ayaa ah in Israa’iil ay dib u siiso dhammaan dhulkii ay qabsatay dagaalkii 1967. Ilaa Israa’iil ay ka wareejiso dhulalkaas Jaamacadda Carabtu waxay ogolaatay inaysan nabad helin, aqoonsi iyo gorgortan midna lala yeelan doonin dawladda Israa’iil. Si kastaba ha noqotee, Masar …
Waa sheekada Dhiirigalinta Leh ee Jawaahir Rooble: Haweeneydii ugu Horeysay oo Muslim ah oo UK Garsoore Ka Noqotay, Ujeedadeeduna Tahay Inay Garsoore ka Noqoto Ciyaaraha Premier League Jawaahir Ahmed waxa ay rajeyneysaa inay noqoto qofkii ugu horeyey oo dumar ah oo garsoore ka noqdo cayaaraha UK. Iyada oo Toban jir ah ayey UK timid waxayna la socotay waalidkeed oo kasoo cararay/qaxay dagaaladii sookeeya ee Soomaaliya. Jawaahir Rooble oo ah gabar Muslimad ah oo Soomaaliyeed ayaa noqotay garsooraha kaliya ee sida Rasmiga ugu diiwaan gishan FA ee xirta Xijaab kulamada ay dhex dhexaadineyso. Markii ay UK imaadeen waxay dageen Wembley oo …